Bangkok International Documentary Awards 2020 အခမျးအနားကွီးမှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွု အကဲဖွတျဒိုငျတဈဦး အဖွဈဖိတျကွားခွငျး ခံရတဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျ – Let Pan Daily
Let Pan | November 5, 2020 | Celebrity | No Comments
နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျအကယျဒမီဝတျမှုနျရှရေညျ ကိုတော့ ပရိသတျကွီးနဲ့အထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုတော့ဘူးထငျပါတယျ။ သူမကတော့မွနျမာနိုငျငံမှာထိပျတနျးရောကျနတေဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈသလိုထိုငျးနိုငျငံနဲ့တခွားနိုငျငံတှမှောပါ အနုပညာအလုပျတှကေိုတှဲဖကျလုပျကိုငျလကျြရှိပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျးဝတျမှုနျရှရေညျက နာမညျကြျော Bangkok International Documentary Awards 2020 အခမျးအနားကွီးမှာ မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွုအကဲဖွတျဒိုငျတဈဦးအနနေဲ့ ဖိတျကွားခွငျးခံခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။
အဲဒီအကွောငျးလေးကိုရှကေဈက ဝမျးသာပီတိဖွဈစှာနဲ့ယခုလိုပဲပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “It is my pleasure to beapart of the jury team for Bangkok International Documentary Film Awards 2020. Withavariety of Europe, America, Africa, Middle East and Asia submissions, I hope that the opposition will be very challenging and can’t wait to express my opinions. Cheers everyone and good luck #Kit
နာမညျကြျော Bangkok International Documentary Awards 2020 အခမျး အနားကွီး မှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွု အကဲဖွတျဒိုငျတဈဦး အနနေဲ့ ဖိတျကွားခွငျးခံရတဲ့အတှကျ ကဈ တဈကယျ့ကို ဝမျးမွောကျမိပါတယျ။ ဒီအခမျးအနားကွီးမှာ ဥရောပ၊အမရေိက၊အာဖရိက၊အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေနဲ့အာရှတိုကျအသီးသီးက စိတျဝငျစားစရာ Documentary ဇာတျကားတှပေါဝငျပွသသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီ Documentary ဇာတျကားတှကေိုကွညျ့ရှုပွီး ကဈရဲ့အမွငျတှကေို မြှဝသှေားဖို့လညျးမစောငျ့နိုငျတော့ပါဘူး။ အားလုံးကံကောငျးကွပါစနေျော ☘️ Love Kit”ဆိုပွီးရေးသားကာဖျောပွပေးထားခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျရပါတယျ။
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ သူမကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ အနုပညာအလုပ်တွေကိုတွဲဖက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းဝတ်မှုန်ရွှေရည်က နာမည်ကျော် Bangkok International Documentary Awards 2020 အခမ်းအနားကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းလေးကိုရွှေကစ်က ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စွာနဲ့ယခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “It is my pleasure to beapart of the jury team for Bangkok International Documentary Film Awards 2020. Withavariety of Europe, America, Africa, Middle East and Asia submissions, I hope that the opposition will be very challenging and can’t wait to express my opinions. Cheers everyone and good luck #Kit
နာမည်ကျော် Bangkok International Documentary Awards 2020 အခမ်း အနားကြီး မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ဦး အနေနဲ့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့အတွက် ကစ် တစ်ကယ့်ကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကြီးမှာ ဥရောပ၊အမေရိက၊အာဖရိက၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့အာရှတိုက်အသီးသီးက စိတ်ဝင်စားစရာ Documentary ဇာတ်ကားတွေပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Documentary ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရှုပြီး ကစ်ရဲ့အမြင်တွေကို မျှဝေသွားဖို့လည်းမစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ အားလုံးကံကောင်းကြပါစေနော် ☘️ Love Kit”ဆိုပြီးရေးသားကာဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါတယ်။
တဈနှဈသား အရှယျတညျးက မိခငျဖွဈသူကမှေးစားဖို့ ပေးခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ ဝမျးနညျးစရာ ငယျဘဝ အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဦးခငျလှိုငျ
မွငျသူတိုငျး အံ့အားသငျ့စမေယျ့ ပုံရိပျ တဈခြို့ကို ခပြွလာတဲ့ သဇငျဦး